कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन तापक्रम जाँच्नु कत्तिको प्रभावकारी? – Health Post Nepal
कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन तापक्रम जाँच्नु कत्तिको प्रभावकारी?
२०७८ माघ १९ गते ११:३७
काठमाडौं – कोरोना संक्रमण पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्कुल कलेज बन्द गरेको छ भने थुप्रै ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन र सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। साथै तपाईंहरुलाई थाहा नै होला थुप्रै ठाउँमा प्रवेश गर्नुअघि इन्फ्रारेड स्किन थर्मोमिटरबाट तापक्रम नापिन्छ। के तापक्रमको जाँचले मात्र कोरोना भए-नभएको पुष्टि गर्छ त?
उसो त कोरोना भाइरसका धेरै लक्षणहरू भए पनि ज्वरो पनि संक्रमणसँग सम्बन्धित छ। कोभिड पोजेटिभका ५० प्रतिशत भन्दा बढी केसहरूमा व्यक्तिलाई चिसो लाग्ने र ज्वरो आउने हुन्छ। विशेष गरी सुरुमा यसले तपाईंलाई संक्रमण भएको छ वा छैन भनेर थाहा पाउन धेरै हदसम्म मद्दत गर्दछ। यही कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा शरीरको तापक्रम जाँच गरिन्छ ताकि संक्रमित व्यक्तिको पहिचान गर्न सकियोस् र भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्न सकियोस्। जे होस्, तापक्रम मात्र जाँच गर्नु तपाईंको लागि कहिलेकाँही समस्या हुन सक्छ विशेष गरी लक्षण नभएका मानिसहरूमा।
ज्वरोको परीक्षणले कोभिडबाट सुरक्षा दिन सक्छ?
शरीरको तापक्रम बढ्नु कोरोनाको लक्षण मध्ये एक हो। तर यो मात्रै लक्षण होइन भनेर जान्न जरुरी छ। नाक बग्ने, टाउको दुख्ने, थकान, घाँटी दुख्ने जस्ता प्रारम्भिक लक्षणहरू पनि छन्, जुन पत्ता लगाउन गाह्रो हुन सक्छ। केवल शरीरको तापक्रम परीक्षण गरेर त्यसको आधारमा मानिसहरूलाई अलग गर्न सक्नुहुन्न। जसबाट पूर्णरुपमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
हो, व्यक्तिमा कोरोनाका अन्य लक्षणहरू पनि देखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिइएको शरीरको तापक्रम संक्रमण पहिचान गर्न उपयोगी हुनसक्छ। ज्वरो नआएमा पनि व्यक्तिमा संक्रमण भएको हुनसक्छ। यो जरुरी छैन कि संक्रमित व्यक्तिलाई ज्वरो आएकै हुनुपर्छ भन्ने। बिरामीलाई संक्रमण भएको तर ज्वरो नआएका यस्ता थुप्रै केसहरु छन्।
तापक्रम जाँचको प्रभावकारीता
धेरै अध्ययनहरूले यो पनि देखाएका छन् कि कहिलेकाँही इन्फ्रारेड स्किन थर्मोमिटरले गलत परिणाम पनि देखाउने गरेका छन्। यसको प्रभावकारीता डिजिटल थर्मोमिटर बराबर नै हुने बताइए पनि नतिजा कहिलेकाँही गलत पनि आउनसक्छ। ब्राजिलको एक अध्ययनमा इन्फ्रारेड थर्मोमिटरबाट परीक्षण गर्नुको सट्टा गन्ध थाहा भए-नभएको परीक्षण गराउनु अझ प्रभावकारी साबित हुने बताइएको थियो। किनकि स्वादमा कमी आउनु वा गन्ध थाहा नपाउनु कोरोना संक्रमणको एक प्रमुख लक्षण हो।
यस अध्ययनको क्रममा, अनुसन्धानकर्ताहरूले यो पनि फेला पारे कि, शरीरको तापक्रम परीक्षणले मात्र धेरै केसहरूमा कोभिड पत्ता लगाउन असफल भएको थियो।
हामी सबैलाई थाहा छ कि कोरोना अझै समाप्त भएको छैन र यो कहिले समाप्त हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। यद्यपि, शरीरको तापक्रम जाँच गर्नु भनेको भाइरस सकेसम्म धेरै मानिसहरूमा नपुगेको सुनिश्चित गर्ने एक मात्र तरिका हो। यो शतप्रतिशत सही सावित त हुनसक्दैन। किनकि प्रत्येक व्यक्तिमा संक्रमणका लक्षण फरक-फरक हुनसक्छन्। तापक्रममात्रले कोरोना पुष्टि गर्न सक्दैन।
यदि तपाईं कुनै पोजेटिभ भएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको छ र तपाईंमा केही लक्षणहरू देखिँदै छन् भने आफूलाई तुरुन्त अलग गर्नुहोस्। यसबाहेक भाइरसबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुने, सधैं मास्क लगाउने र अरूबाट ६ फिटको दुरी कायम गर्ने गर्नुस्।